सक्दो सेयर गरौँ-यिनै हुन् अस्ट्रेलियामा चक्कु लिएर लुटेरा लखेट्ने नेपाली चेली पवित्रा कार्की ! -
Home विदेश सक्दो सेयर गरौँ-यिनै हुन् अस्ट्रेलियामा चक्कु लिएर लुटेरा लखेट्ने नेपाली चेली पवित्रा...
काठमाडौं । अहिले अस्ट्रेलियामा बस्ने एक नेपाली युवती चर्चामा छिन् । अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा पसलमा बसेकी ती युवतीले पसल लुट्न आएका एक लुटेरालाई चक्कु लिएर दौडाइन् ।
पवित्रा कार्कीले लुटेरालाई चक्कुले तर्साएर भगाएको घटनाको सीसीटिभी फुटेज सार्वजनिक भएसँगै उनको चर्चा बढेको छ । ‘ऊ ढोकामा आयो अनि पैसा माग्यो । म डराएँ । मैले उसको कुरा बुझिन र के भन्न खोजेको भनेर सोधें । उसले पैसा देउ, पैसा देउ भन्यो’ पवित्राले अस्ट्रेलियाको सेभेन न्यूजसँग कुरा गर्दै भनिन् ‘मैले किचनको चक्कु निकालेर उसलाई हान्न खोजें ।
त्यसपछि ऊ भाग्यो ।’ यो पसल उनको परिवारको पसल हो । यसबाहेक उनी त्यहाँ चाइल्ड केयर वर्कर बन्ने उद्देश्यसहित अध्ययन गरिरहेकी छिन् । Dc Nepal बाट साभार— व्यक्तिको घरझगडामा युट्युबरको प्रवेश : यो कस्तो खालको पत्रकारिता हो ?
उदाहरण १ : उर्मिलाकी आमा मिडियामा कुटाकुट, मुखामुख, आमा छोरीको रुवाबासी । हिमेश न्यौपाने न्यु भिडियो ।केही दिन पहिले टाइम्स खबर नेपाल नामक युट्युब च्यानलमा राखिएको भिडियोको शीर्षक हो यो ।
भिडियोको हाइलाइट्समै आमा छोरीको झगडा र भनाभन राखिएको छ । सो भिडियोमा छोराछोरी छोडेर दोस्रो बिहे गरेकी एक महिला, उनका दोस्रो पति र उनका छोराछोरीबीचको वादविवाद समेटिएको छ । युट्युबरले आमाले अर्को पुरुषसँग बिहे गरेर गएको घरमा ती महिलाका पूर्वपति तर्फका छोराछोरी लिएर गएको र त्यहाँ भनाभन भएको देखिन्छ ।
भिडियोमा बालबालिका र उनको आमाको भनाभन मात्र राखिएको छैन उनीहरूको परिचय पनि खुलाइको छ । ती महिलाको सुत्ने खाटमा गएर बसेका युट्युबरले महिलाले बोल्न नमान्दा नमान्दै पनि बोल्न बाध्य पारेका छन् ।
उदाहरण २ : श्रीमान् विदेशमा हँुदा घरमै वेश्यालय बनाएर छोरीकै अगाडि सम्पर्क गर्ने उनकी श्रीमती र उनकै दिदी खुलदुली मिडिया अफिसियल च्यानल नाम गरेको युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिएको भिडियो शीर्षक हो यो ।
उदाहरण ३ : एक्सक्लुसिभ : यति ठूलो सफलता : आफ्नै छोरी भगाउने सानो बाउ फिल्मी शैलीमा झापामा छापा मारेर समातिए भिडियोको थम्बनेलमा लेखिएको छ– ‘एक्सक्लुसिभ झापामा सन्तोषको छापा, छोरी भगाउने सानो बाउ प्रहरीको खोरमा’ दुई हप्ताअघि कपुरबोट टीभी नामक युट्युब च्यानलमा युट्युबर सन्तोष देउजाले अपलोड गरेको भिडियोको शीर्षक हो ।
उनीहरूले के अपराध गरे, त्यो हेर्ने जिम्मा पाएको न्यायिक निकाय नेपाल प्रहरी र अदालतभन्दा अगाडि नै उनले २ मिनेटमै केरकार गरेर फैसला गरिदिन्छन् । रोचक कुरा त के छ भने प्रहरीले जघन्य अपराधीलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्दासमेत मास्कले मुख छोपेर सार्वजनिक गर्छ, घटनामा पीडित वा आरोपित महिला छन् भने अदालतमा सबैको सामु बयान दिन असजिलो हुन्छ भनेर बन्द इजलासको समेत व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
तर युट्युबरले ती सबै कुराको धज्जी उडाएको महसुस हुन्छ । त्यो पुरुषले गरेको अपराधको आधारमा ऊ त भोलि जेल जाला तर ती १६ वर्षकी युवतीको सम्पूर्ण परिचय र उनको भिडियो सार्वजनिक गरेपछि त्यसबाट उनले जिन्दगीभर कति मानसिक यातना खप्नुपर्ला ? दोस्रो भिडियोमा त युट्युबरले गाडीभित्र राखेर उनीहरू दुई जनाबीच कसरी सम्बन्ध बस्यो भनेरसमेत अन्तरवार्ता गरेका छन् ।
उदाहरण ४ : कोठमा मोज गर्दागर्दै रङ्गे हात समातियो, म निदाएको बेला आमा र अङ्कल पल्लो खाटमा, ८ वर्षीय छोराको बयान.. २७ अगस्टमा अपलोड भएको सिलिचुङ्ग टेलिभिजन नाम रहेको युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिएको माथिको शीर्षक रहेको भिडियोमा ३ लाख ६४ हजार भ्युज रहेको छ ।
माथिका उदाहरण जस्तै यो भिडियोमा पनि दोस्रो बिहे गरेर जाने महिलाको चरित्रबारे उनका श्रीमान र बालकसँग कुराकानी गरिएको छ । बालकलाई उनकी आमाको यौन व्यवहारबारे प्रश्न सोधिएको छ । बालअधिकार, बाल मनोविज्ञानमा पर्ने असरको कुनै ख्याल नगरी युट्युबबाट व्यक्तिको घर परिवारको निजी मामिलामा प्रवेश गरी यसरी बालबालिकासँग अन्तरवार्ता गरेर सार्वजनिक गर्दा भोलिका दिनमा उनीहरूलाई त्यो भिडियोले मानसिक समस्या दिने मनोविद बासु आर्चाय बताउँछन् ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली कोही कमजोर चरित्रको छ भने पनि त्यसमा कसैले प्रश्न गर्न नपाउने र उसको गोपनीयताको हकलाई हनन गरिदिने व्यक्तिलाई जेलसम्मको सजाय हुने बताउँछन् । माथि प्रस्तुत गरिएका युट्युबमा आउने पारिवारिक, व्यक्तिगत समस्या र झगडामा आधारित भिडियोका केही नमुना मात्र हुन यी । अहिले युट्युबमा एक जमात युट्युबर व्यक्तिको पारिवारिक समस्याको मामिलामा हात हालेर भिडियो बनाउँदै युट्युबबाट आर्थिक उपार्जनमा लागेका छन् ।
पछिल्लो समय विकास भइरहेको युट्युबकारिताको शैली, त्यहाँ समेटेर अन्तरवार्ता लिने विषयवस्तु आदिका बारेमा कानुनी रूपमा, प्रत्रकारिताको दृष्टिकोणबाट र मनोविश्लेषणको दृष्टिकोणबाट कसरी लिन सकिन्छ ? यसबारेमा विषयविज्ञसँग कुराकानी गरेका छौँ : साइबर क्राइम, गोपनीयता हनन, बिना अनुमति भिडियो खिचेको अभियोगमा जेल जान सक्छन् : अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली
कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने फौजदारी कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त छ । व्यक्तिको शरीर उसको जीवन हो, कुनै महिला वा पुरुष जसले पनि निजी जीवन आफूले चाहेजसरी जिउन पाउनु उसको प्राकृतिक प्रदत्त अधिकार हो । त्यसमा कसैले प्रश्न गर्न पाउँदैन र प्रश्न गर्ने कसैलाई अधिकार पनि हुँदैन ।
शरीर निजी भएको हुनाले त्यहाँ गोपनीयताका कुराहरू आउँछन् । संविधानको धारा २८ मा गोपनीयताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुरक्षित गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो जिउ तथा चरित्रसम्बन्धी विषयमा गोपनीयताको अधिकार हुन्छ भनी मौलिक हकमा भनिएको छ । त्यसकारण गोपनीयता हनन् गरिदिने व्यक्तिलाई जेलसम्मको सजाय हुन्छ ।
अहिले एक जना व्यक्तिको नेतृत्वमा उसैले खिच्ने र बोल्ने गरेर युट्युब चलाएको देखिन्छ । कतिपय युट्युबरले जबर्जस्ती क्यामेरा तेस्र्याएर सोध्न नमिल्ने अश्लील प्रश्नहरू पनि सोधेका देखिन्छन् । व्यक्तिको आफ्नो जीवन हुन्छ, भिडियोसहित युट्युबमा राखिँदा उनीहरूको गोपनीयता समेतको गम्भीर उल्लङ्घन भएको हुन्छ ।
पीडितलाई थप पीडा दिने गरी भिडियोमार्फत् सार्वजनिक गर्नु फौजदारी कसुर हो । त्यो कसुर कानुनको शासन भएको राज्यमा छुट हुँदैन । भिडियो खिच्नेहरूसँग सामान्य ज्ञानसमेत भएको देखिँदैन । कस्तो प्रश्न सोध्न मिल्छ, त्यो कुरा सार्वजनिक गरियो भने व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा के कस्तो क्षति पुग्छ भन्ने कुरा सोच्दै नसोची अनुमति बिना प्रसारण गर्नु कसुर हुन जान्छ ।
पीडितलाई थप पीडा थप्ने काम मिडियाबाट हुन्छ भने त्यो झन् अर्को अपराध हो : लक्ष्मी पुन, सचिव, नेपाल पत्रकार महासङ्घ : मिडिया सम्बन्धी विभिन्न संस्थाहरू र नेपाल पत्रकार महासङ्घको सहभागितामा धेरै पहिलेदेखि नै पत्रकार आचारसंहिता बनेको छ । पत्रकारले के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भनेर बुकलेट नै निकालेका छौँ । पत्रकार भनेको आवाजविहीन र सीमान्तकृत समुदायका मानिस जो वास्तवमा पीडामा हुन्छन् ।
अहिले युट्युबमा आउने कतिपय केस हेर्दा यस्तो लाग्छ, कतिपय कुराहरू व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कुराहरू पनि आउँछन् । कुनै महिलाले घरपरिवार छोडेर गयो भने उसको इच्छाले गयो त । त्यसलाई खोजेर ल्याएर बहादुरी गरेजस्तो, कसैले कहीँ गर्न नसकेको ठूलो काम गरेजस्तो देखाउने गरेका छन् ।
कतिपय युट्युबरहरूको नाम एकदमै चर्चामा आइरहेको छ । रातारात सेलिब्रेटी जस्तो बनिरहेका छन् । बालबालिका त्यही हेर्छन्, उनीहरूको मनोविज्ञानमा के परहेको छ भने यसरी भिडियोमा मान्छेको पाखुरा तानेर प्रश्न गरेपछि चर्चित भइँदो रहेछ । भोलि म पनि यस्तै युट्युबर बन्ने भन्ने मानसिकतामा परेको छ । यो तरिका अहिले गलत बाटोतर्फ गइरहेको छ ।
पत्रकारिताको आफ्नै खालको एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ । जेसुकै कुरालाई पनि उछालेर ल्याएर, घरपरिवारको झगडा परेको छ भने पनि त्यसलाई युट्युबमा ल्याउने क्रम बढेको छ । गम्भीर प्रकृतिको घटना छ र पीडितलाई थप पीडा नहुनेगरी प्रहरी अनुसन्धानपछि त्यसको फलोअप गर्नु सामान्य हो । त्यसमा पनि पीडितको नाम नखुलाएर हुन्छ कि उसको फोटो ब्लर गरेर हुन्छ कि त्यसरी गर्दा केही हदसम्म त ठीक होला पनि तर ससाना झिना मसिना कुराहरू कोट्याउँदै हिँड्नु ठीक होला जस्तो लाग्दैन ।
अदालतले निर्णय नगर्दै युट्युबरहरू आफै निर्णय गर्दै हिँड्ने, आफै फैसला सुनाउने तरिकाले प्रस्तुत भइदिने यस्तो प्रवृति गलत हो । व्यक्तिको आफ्नो स्वतन्त्रता पनि हुन्छ, कसैले आफूखुसी बिहे ग¥यो भने तिमीले किन बिहे गरेको भनेर उसलाई बाध्य बनाएर सार्वजनिक गर्नु गलत हो । मान्छेको आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हुन्छ, गोपनीयताको पनि कुरा हुन्छ । तपाईंसँग क्यामेरा छ भन्दैमा व्यक्तिका निजी जीवनका कुराहरूलाई छताछुल्ल पारिदिनुपर्छ भन्ने कुनै आवश्यकता छैन ।
पीडामा युट्युबमा बोलेकाहरू पछि झन् मानसिक समस्यामा पर्छन् : बासु आचार्य, मनोविश्लेषक : युट्युबमा बालबालिका तथा महिलाहरू कुनै पीडा परेको बेलामा आवेशमा आएर आफ्ना दुःख पीडा खोल्ने गर्छन् । पछि गएर त्यही भिडियो हेर्दा उनीहरूलाई गाह्रो पार्न सक्छ । अहिले बाल्यकालमा रहेका उनीहरूको भोलिको जीवन फरक हुन्छ । पछि कुनै पेसा अँगालेको हुन्छ । उनीहरूको श्रीमान श्रीमती हुन्छन् । भोलि उनीहरूको भविष्य राम्रो पनि हुन सक्छ ।
यतिबेला लिएको भिडियो उनीहरूको जीवनसाथीले हेर्दा, अरू साथीभाइले हेर्दा उनीहरूलाई त्यो भिडियोले धेरै दुःख दिन सक्छ । मानसिक रूपमा, सामाजिक रूपमा हरेक रूपमा उनीहरूलाई दुःख दिन सक्छ ।
माथि उदाहरणमा प्रस्तुत गरेका एउटा भिडियो हेर्दा त्यसमा कति तुच्छ तर्क कति असभ्य कुराहरू बोलिएका छन् । युट्युबर को हुन् म चिन्दिनँ घरझगडामा माइक प्रयोग कति असुहाउँदो देखिएको छ । त्यस्तो भिडियो हेर्ने हाम्रा बालबालिकामा पनि जिन्दगी भनेको त यस्तो पो हँुदोरहेछ भन्ने पर्छ । कतिपय मानिसलाई कुनै पनि दर्दनाक घटना देख्दा, सुन्दा पनि पछिसम्म असर पार्छ । यसले नकारात्मक सन्देश दिइरहेको हुन्छ ।
जस्तो सामाजिक संरचना हुन्छ सोहीअनुसार मानसिकता पनि विकास भइरहेको हुन्छ । बोको हरामले नियन्त्रण गरेको क्षेत्रमा त्यहाँमा मान्छेहरूले बन्दुक बोक्नुलाई नराम्रो मान्दैनन्, त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन्छन् । अफगानिस्तान, इराक जस्ता देशका समाजमा बन्दुक बमलाई सामान्य मान्ने अवस्था थियो ।
नेपालमा युद्धकालमा दैनिक दुई चार जना मान्छे मरेको नौलो लाग्दैनथ्यो । भनाइको मतलब समाज जुन अनुरूपको छ, त्यही किसिमको मानसिकता विकास भइरहेको हुन्छ । हामीकहाँ घरायसी झगडाको भिडियो हेरेर मनोरञ्जन लिने आदत बढ्दै गएको छ । भिडियो हिट भएको देख्दा घरझगडा, हत्या, हिंसा, जोगी, मुकुन्दे, कोरोनालाई गाली गरेका, अश्लील शब्द राख्दै भिडियो बनाएका यस्तै खालका भिडियो मेरो मनोरञ्जनको साधान हो भनेर अपनाउन नेपाली समाज तयार भइरहेको देखिन्छ ।
अविकसित देशका हामी नागरिक पनि मानसिक रूपमै अविकसित हुन्छौँ । नेताहरूले पनि हाम्रो मानसिकता हेरेर नै आफ्नो रणनीति बनाएका हुन्छन्, त्यहीअनुसार खर्च गरेका हुन्छन् । हामीलाई शिक्षामा खर्च गरिदिने कि रक्सीमा खर्च गरिदिने उनीहरूले बुझेका हुन्छन् । खुलामञ्च सडकमा खाना खाइरहेको बालक र उसको बाबुलाई क्यामेराहरूले घेरेर भिडियो खिचेको एउटा दर्दनाक फोटो सामाजिक सञ्जाललमा आएको छ ।
नियमनकारी निकाय पर्खने कि युट्युबर आफै सच्चिने ? पत्रकारिता पेसा सम्बद्ध मिडिया, पत्रकार, सञ्चारकर्मीलाई नियमन गर्नका लागि नियमनकारी निकायका रूपमा प्रेस काउन्सिल नेपाल रहेको छ । तर पछिल्लो समय विकास भएको युट्युबकारितालाई नियमन गर्न भने पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभएको काउन्सिलका पदाधिकारी बताउँछन् । । पारिवारिक झगडाको समस्या वा पीडामा रहेका बालबालिका हुन् वा महिला, जसरी उनीहरूलाई पूर्ण विवरण खुलाएर युट्युबमा सार्वजनिक गरिन्छ ।
त्यो भिडियोका कारण भोलि समाजमा उनीहरूको थप बदनामी त हुँदैन ? उनीहरूमाथि कस्तो व्यवहार गरिएला र त्यसले उसमा कस्तो मानसिक समस्या पर्ला ? पारिवारिक समस्या पीडित बालबालिकालाई यसरी सार्वजनिक गर्दा उनीहरूको साथीहरूले, समाजले हेर्ने र गर्ने व्यवहार कस्तो होला ? त्यसले उनीहरूमा कस्तो मानसिक समस्या उत्पन्न गर्ला ? घर घटनाका बारेमा अरूलाई प्रश्न गरेर भिडियो बनाउने युट्युबरले यस्ता प्रश्नहरू पहिला आफैलाई सोधे कसो होला ? Source: Ratopati.com